Muxuu ka yiri Eden Hazard guushii ay kaga gaareen Southampton St Mary’s Stadium? – Gool FM
Muxuu ka yiri Eden Hazard guushii ay kaga gaareen Southampton St Mary’s Stadium?
Dajiye October 7, 2018
(Chelsea) 07 Okt 2018. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Chelsea Eden Hazard ayaa amaanay kooxdiisa Blues, kadib seddexda dhibcood ay kaga qaateen dhigooda Southampton kulankooda 8-aad ee horyaalka Premier League.
Kooxda Chelsea ayaa guul muhiim ah ee 3-0 kala soo laabtay St Mary’s Stadium guul muhiim ah, kulankooda 8-aad ay xili ciyaareedkan ka ciyaareen horyaalka Premier League.
“Waxaan ku riyaaqeynaa inaan si fiican u ciyaarno islamarkaana aan dhalino goolal, qeybtii hore ma aysan aheyn mid fudud, Southampton waxay iska lumisay fursado badan”.
“Waxaan helnay nasiib yar, waxaana dhalinay goolka koowaad ee ciyaarta,laakiin qeybta labaad ayaan xakameenay ciyaarta”.
“Ma aqaan hadii aan u ciyaarayo si wanaagsan xiligan, waxaan ciyaaraa kubad wanaagsan, sababtoo ah koox ahaan Chelsea waxaan u ciyaareenaa si wanaagsan, waxaana dooneynaa inaan sii wadno, qof walbana wuu faraxsanaan doonaa”.
Shaxda rasmiga ah ee Valencia vs Barcelona
Safafka rasmiga ah ee SPAL vs Inter Milan